Amakhadi Amabhizinisi - Print Peppermint
Vumela ikhadi lakho ukuthi likhulume ngamathani wokuqeda okukhethekile okukhethekile, amaphepha e-premium, nezindlela zokuphrinta eziwubukhazikhazi.
Thenga Amakhadi Ebhizinisi Ngosayizi Nomumo
Hamba uthole unxande ojwayelekile wakudala noma uthole indle ngokusika okufa ngokwezifiso kanye nezinye izimo nosayizi abajabulisayo.
Thenga Amakhadi Ebhizinisi Ngephepha
Yehluka ngokukhethwa kwethu okukhethwe ngokucophelela kwamaphepha e-premium nezinto zokwakha ezifana nalezi: awugqinsi, ongqimba, ukuthinta okuthambile, ipulasitiki, ukhuni, insimbi, nokunye!
Amakhadi Ebhizinisi Elithambile
I-Neon Paper Business Cards
Amakhadi Ebhizinisi Anemibala Ephakathi Ephakathi
Thenga Amakhadi Ebhizinisi ngama-Special Finishings
Engeza okunethezeka nokuheha ekhadini lakho lebhizinisi elinezici eziningi ezithokozisayo zokuqedela ukuphrinta.
I-Foil Edge Business Cards
I-Foil Enyusiwe ngemibala engu-9 kumakhadi ebhizinisi angu-16pt Matte
Ugqinsi Kabili + Igolide noma Isiliva
Zama Isihleli Sethu Samakhadi Ebhizinisi Angokwezifiso!
Yakha Amakhadi Ebhizinisi amaphupho akho! Ukwenza ngokwezifiso yonke into!
Khetha umumo wakho
Khetha Iphepha lakho
Engeza ama-Finishings akho
Yenza Ibhizinisi Lakho Ligqame Ngalo Print PeppermintIzinsizakalo Zokuphrinta Amakhadi Ebhizinisi
Ingabe ufuna ukuphrinta amakhadi ebhizinisi? Print Peppermint usenkonzweni yakho! Izinsizakalo zethu zokuphrinta ezifinyelelekayo nezinekhwalithi zilapha ukuze zisekele bonke abanikazi bamabhizinisi ekwengezeni ukuthinta okuphrofeshinali esithombeni sabo nokuthola ikhadi lebhizinisi elibamele ngempela.
Print Peppermint inikeza izinsiza eziphelele zokuphrinta ezihlose ukusekela abanikazi bamabhizinisi kanye nosomabhizinisi ngakho konke abakudingayo.
Sibe sebhizinisini kusukela ngo-2010, futhi eminyakeni edlule sakhe idumela eliqinile lekhwalithi nezinsizakalo ezithembekile zokuphrinta amakhadi ebhizinisi ongangena kuwo noma kunini. Amasevisi ethu alapha ukuze akukhuthaze, akusize uthathe umbono wakho onzima uwuyise kwelinye izinga, noma nje ukukusiza ukuthi ufinyelele izinsiza zokuphrinta zekhwalithi zesifanekiso sekhadi lakho lebhizinisi lamanje!
Sikukhuthaza ukuba hlola ukukhethwa kwethu kwemiklamo yekhadi lebhizinisi, noma ukufinyelela kithi ngokuqondile ukuze uthole a isilinganiso sesiko kuwer oda!
Amakhadi Omuntu Siqu Webhizinisi: Ubani Owadingayo?
Njengoba kuwumhlaba wedijithali, ungase ukholelwe ukuthi amabhizinisi amaningi asukile ekhadini lebhizinisi elivamile, kodwa akunjalo. Amakhadi ebhizinisi asenendima emangalisayo okufanele ayidlale endaweni yanamuhla.
Uma lenziwe kahle, ikhadi lebhizinisi lingaba nomthelela omangalisayo ebhizinisini lakho lonke, njenge:
Amakhasimende angaba khona ahlaba umxhwele noma ozakwethu
Ukuqinisa isithombe somkhiqizo wakho kanye nesiqondiso
Kuhle uma ubamba iqhaza emicimbini
Nikeza indlela elula yokuthi abantu bakukhumbule futhi baxhumane nawe
Zihlukanise nomncintiswano futhi uthole ukubonakala okwengeziwe
Indlela ethengekayo yokuxhumana nokukhuthaza ibhizinisi lakho
Ukukunikeza ukubukeka okuhle kakhulu, ngisho nokusemthethweni, njll.
Ngenxa yalokho, wonke umuntu angazuza ekunyatheliseni ikhadi lebhizinisi! Noma ngabe uku:
Umnikazi webhizinisi elikhulu, eliphakathi, noma elincane
Umuntu osanda kuqala njengosomabhizinisi
Isisebenzi esizimele esibheke ukwenza izinto zibe semthethweni kakhulu
Umeluleki noma omele inkampani ofuna ukuxhumana namakhasimende angaba lula
Kungakhathaliseki ukuthi ikhadi lebhizinisi lakudala noma ikhadi legama elivumela abantu ukuthi bazi ukuthi baxhumane nawe kanjani, ukuphrinta amakhadi ebhizinisi kuseyisevisi efanele namuhla futhi kuzoba isikhathi eside. Ukutshala imali kuzo ngeke kube yize!
Ukuphrinta Ikhadi Lebhizinisi Eduze Kwami?
Ukufuna izinsizakalo zokuphrinta ikhadi lebhizinisi kuzonikeza izinketho eziningi, ezinye zazo ezingase zibe khona eduze kwehhovisi lakho noma ekhaya.
Kodwa-ke, ngaphambi kokuthi ukhethe inkampani yokuphrinta yezitini nodaka, hlola ezinye zezinzuzo ezihlukile abahlinzeki besevisi yokuphrinta ku-inthanethi njenge Print Peppermint inganikela:
Amanani Athengekayo Engeziwe – Njengoba singenazo izindleko ezingaphezulu ezifana nezinkampani eziphrinta izitini nodaka, siyakwazi ukuhlinzeka ngamasevisi ethu ngamanani ancintisanayo, okuyinzuzo enkulu kuwo wonke amakhasimende ethu. Ibavumela ukuthi bathole inani eliqondile lamakhadi ebhizinisi abawadinga ngempela ukuze benze umehluko, kuyilapho futhi bengayekethisi ekwakhiweni noma kukhwalithi;
Ukunethezeka - Ungathola idizayini yakho eyintandokazi (noma ulayishe owodwa osuvele unayo), engeza imininingwane, bese uthumela i-oda ngemizuzu, ngokunethezeka kwehhovisi lakho noma igumbi lokuhlala. Siyaqonda ukuthi umatasatasa futhi uzama ukukhulisa ibhizinisi lakho, ngakho senze isiqiniseko sokuthi amasevisi ethu okuphrinta amakhadi ebhizinisi ayafinyeleleka ngangokunokwenzeka;
Ukukhetha Okuhle Kwemiklamo, Iphepha, Imibala, nokunye - Sizimisele ukukhuthaza wonke amakhasimende ethu okungenzeka ukuthi athole ikhadi lebhizinisi lamaphupho awo, ngakho-ke noma ungazi ukuthi amakhadi akho kufanele abukeke kanjani, ukukhetha kwethu okubanzi kwemiklamo kungakusiza ukuthi uthole ugqozi oluthile. Ukwengeza, wonke amakhadi angenziwa ngendlela othanda ngayo, ukuqinisekisa ukuthi umphumela wokuphela uhlangabezana njalo nalokho okulindele;
Oda noma Kukuphi - Awunayo isevisi yokuphrinta ikhadi lebhizinisi eduze nawe? Akunandaba! Awudingi ukuya ekhadini lakho lebhizinisi lokuphrinta ukusuka Print Peppermint. Vele ubeke ama-oda akho endaweni yangakini futhi sizokuthumela amakhadi akho ngqo emnyango wakho;
Ukwesekwa Kwamakhasimende Okumangalisayo - The Print Peppermint ithimba lokusekela amakhasimende lihlala likhona ukuze liphendule imibuzo yakho, likusize uhlele kahle i-oda lakho, futhi likunikeze ukusekela kochwepheshe neziqondiso ezihambisana nezidingo zakho. Abaklami bethu, abasebenzi abanyathelisayo, nabaphathi baxazulule amathikithi okusekelwa kwamakhasimende angaphezu kuka-170,000 phakathi kwabo, ngakho ungangabazi ukuxhumana nabo noma nini lapho kudingeka!
Amasampula – D udinga ukwazi “umuzwa” wekhadi ngaphambi kokuthi uzibophezele? Noma want ukuthola umbono ongcono wokuthi amakhadi abukeka kanjani empilweni yangempela? Bese ukhetha yethu amasampula ekhadi lebhizinisi futhi receinesethi ekhethiwe yamakhadi ahlukene. Lokhu kukusiza ukuthi uhlole ikhwalithi yezinsizakalo zethu zokuphrinta amakhadi ebhizinisi, futhi kukunikeze umbono ongcono wokuthi yisiphi isitayela, imibala, noma ukuthinta kokuqeda okusebenza kangcono embonweni womkhiqizo wakho.
PeppermintIzinsizakalo zokuphrinta zamakhadi ebhizinisi zenziwe zafanelana ngokukhethekile ukuze zisize wonke umuntu ukuthi akhiqize amakhadi amangalisayo anobunzima obuncane. Ungenza amakhadi ngendlela othanda ngayo bese ufaka ama-oda akho emizuzwini embalwa nje.
Uma lokho kuzwakala ncamashi okudingayo nawu, hlola imiklamo yethu eyingqayizivele bese ufaka ama-oda akho namuhla!
Izifanekiso Zamakhadi Ebhizinisi: Ungatholaphi Imiklamo Yamahhala Yekhadi Lebhizinisi
Izifanekiso zekhadi lebhizinisi zingaba usizo kakhulu uma ufuna ugqozi lwamakhadi akho. Ngenhlanhla, kunezindawo eziningi ezihlukene lapho ungathola khona imiklamo emangalisayo yamakhadi ebhizinisi ngezitayela ezahlukene, amaphalethi ombala, amafonti, ngisho nezitayela zokuphrinta!
Futhi indawo yokuqala okufanele iqale khona lapha Print Peppermint iwebhusayithi! Okwamanje sinezinketho ezingaphezu kuka-40 ezidalwe abaklami bamakhadi ethu, njenge:
Wakhulisa Spot UV
Ukotini noma ilineni
Print PeppermintUkukhethwa kwemiklamo yekhadi lebhizinisi ngokuqinisekile kuzokhuthaza noma yibaphi abanikazi bamabhizinisi noma usomabhizinisi ekuchazeni ukubukeka komkhiqizo wabo, ngakho sikukhuthaza ukuthi upheqa ikhathalogi yethu futhi ubone ukuthi iyiphi idizayini ekhuluma kakhulu nawe!
Kusukela kumiklamo yesimanjemanje nencane kakhulu kuye kumibala egqamile, amafonti adonsa amehlo, nezitayela zokuphrinta ezisesitayeleni, noma ubani angathola ukulingana okulungile kwekhadi lebhizinisi esitolo sethu.
Futhi uma ukhathazekile ngokusebenzisa isifanekiso esenziwe kakade, ungakhathazeki: sinikeza izinketho zokwenza amakhadi ngokwezifiso ezizokusiza ukuthi ulungise amakhadi ebhizinisi ahambisane nezidingo zakho ezithile.
Ukwenza Ngokwezifiso Ikhadi Lebhizinisi
Print Peppermint inikeza ukwenza ngokwezifiso ikhadi lebhizinisi ngokuqondile ngoba siyaqonda ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi ikhadi lebhizinisi likumelele ngempela nokuthi umeleni.
Futhi lokho kunzima ukukufeza ngemiklamo eyenziwe ngaphambilini elandela isitayela esithile, yingakho lapho uthenga amakhadi ebhizinisi esitolo sethu, ungakhetha izinhlobonhlobo zezinketho zokwenza ngokwezifiso ukuze wenze amakhadi abe awakho ngempela:
Izimo, ezifana namakhadi ajwayelekile, isikwele, noma amancane
Amakhona aqondile noma ayindilinga
Uhlobo lwephepha, elifana nokungagqokiwe, usilika, elicwebezelayo, nokunye
At Print Peppermint, ungakwazi ngempela ukwenza ikhadi lebhizinisi elimele wena kanye nebhizinisi lakho ngo-100%. Futhi uma izifanekiso zethu zedizayini zingakufanelanga, ungakhathazeki – sinezinye izinketho ezinhle zokukusiza ufinyelele isitayela nomklamo oyidinga ngempela!
Dizayina Ikhadi Lebhizinisi
Our umakhi wekhadi lebhizinisi le-premium kulula ithuluzi eliku-inthanethi elingakusiza ukuthi udale ikhadi lebhizinisi elisha kusukela ekuqaleni. Uma unombono othile mayelana nokuthi amakhadi kufanele abukeke kanjani, noma ufuna ezinye izinketho, nakanjani phendukela kulo makhi!
Vele uvakashele ikhasi bese ukhetha izinto ezisebenza kahle kakhulu embonweni wakho:
Umumo: Khetha phakathi kukanxande, isikwele, indilinga, mini, noma umumo wangokwezifiso;
Ubukhulu bephepha nosayizi
Isihlungi sephepha: Khetha imibala nohlobo lwephepha ekhadini lakho lebhizinisi ukuze uthole ukubukeka okunembile nomuzwa owufunayo wamakhadi;
Ukuqeda ukuthinta: Khetha kusuka ezinhlobonhlobo zokuqedwa kwesitayela okufana nokugxivizwa kwe-foil, amakhona ayindilinga, ukuphrinta kwe-letterpress, ukugoqa, nokuningi!
Umakhi wethu wekhadi lebhizinisi lekhasimende wenza kube lula kuwe ukuthi udale noma ulayishe umklamo wakho futhi uthole amakhadi akho ebhizinisi angokwezifiso! Hhayi lokho kuphela kodwa uma ufuna umbono wochwepheshe ekwakhiweni kwakho, vele uhlole ibhokisi le-PRO Lokubuyekezwa Kobuciko phansi phansi kwekhasi.
Lokhu kuzothumela idizayini yakho kuMqondisi wethu Wezobuciko, ozoyibuyekeza mathupha futhi anikeze izincomo zokuthi ungayithuthukisa kanjani - uma kunesidingo. Asiphambani nokuphelela!
Ukwengeza, uma udinga ukwesekwa okwengeziwe kokuthekelisa ekuklameni amakhadi akho, i-Print Peppers ikunikeza izinsiza ezikhethekile zokuklama ikhadi lebhizinisi elinoshintsho olusheshayo kanye ne-gu yokubuyisela imali.i-arantee. Kalula nje gcwalisa leli fomu futhi usitshele okwengeziwe ngombono wakho, futhi ithimba labadali lizoklama amakhadi ebhizinisi kusukela ekuqaleni, ngokusekelwe eziqondisweni zakho!
Ungawenza Kanjani Amakhadi Ebhizinisi Ekhaya Futhi Mahhala
Siyaqonda ukuthi njengoba uzama ukukhulisa ibhizinisi lakho, izimali zakho eziningi kungenzeka zingena ekusebenzeni kwakho nasekukhangiseni. Kungakho siphinde sinikeze amakhasimende ethu inketho yokulayisha amakhadi awo ebhizinisi esizeni sethu futhi aphrintwe.
Ngale ndlela, empeleni ukhokhela izinsizakalo zokuphrinta kuphela, hhayi izinsizakalo zokuklama. Uma ungenalo ulwazi lokuklama, ungakhathazeki: kunezinsiza eziningi eziku-inthanethi ezifana ne-Canva.com ezikuvumela ukuthi udale kalula imiklamo emangalisayo.
Nazi ezinye izinzuzo zalawa masevisi:
Bahlinzeka ngezifanekiso eziningi zamahhala zamakhadi ebhizinisi neminye imizamo yokumaketha (okuthunyelwe kwezokuxhumana, amalogo, amaphosta, njll.) ungenza ngendlela oyifisayo ekuxhumaniseni kwakho ukuze wenze ikhadi lilingane;
Amathuluzi ahlakaniphile futhi kulula ukuwasebenzisa ngisho noma ungenayo isipiliyoni sokuklama;
Sebenza ngekhathalogi yezithombe zamahhala, izici zesithombe, namafonti ukuze uhlanganise amakhadi ngokuvumelana nombono wakho
Dala futhi ukhiqize ikhadi lakho lebhizinisi ngendlela oyithandayo ngemizuzu nje, mahhala!
Uma ujabulile ngomklamo wakho, ungakwazi umane usithumele i-imeyili umklamo wakho bese ukhetha konke ukuthinta kokuqeda, futhi sizokunakekela okunye!
I-Office Depot Same Day Business Cards ngokumelene Print Peppermint
Uma ufuna amakhadi ebhizinisi ngemali ephansi, amakhadi osuku olufanayo edepho yasehhovisi ayinketho edumile.
Nokho, ukukhiqiza ikhadi lakho lebhizinisi akusona isinqumo okufanele usiphuthume. Ikhadi ngokwalo limele wena kanye nebhizinisi lakho, okusho ukuthi umklamo kufanele ukhulume iqiniso kumagugu akho ayisisekelo kanye nesiqondiso somkhiqizo.
Nakuba singakunikezeli ukuphrinta ikhadi lebhizinisi losuku olufanayo, sinikeza:
Amanani athengekayo - Izinketho zethu zokwenza ngokwezifiso zikusiza ukuthi ulawule ukuthi ikhadi lebhizinisi lizobiza malini. Uma unemibuzo eyengeziwe mayelana namazinga ethu, sikukhuthaza ukuthi ufinyelele futhi uthole isicaphuna esingokwezifiso esivela kithi;
Ukushintsha okusheshayo nokuthembekile - Sithatha izinyathelo ezinhle kakhulu zokuqinisekisa ikhwalithi yazo zonke izinto zethu eziphrintiwe, namakhadi ebhizinisi awahlukile. Nakuba lokhu kusho ukuthi amakhadi akho angase angalethwa ngalolo suku ofake ngalo i-oda lakho, ungathemba ukuthi sinakekela wonke amaphrojekthi ngesikhathi, futhi ithimba lethu lokusekela amakhasimende lingakugcina unolwazi nganoma yiziphi izibuyekezo. Uzothola amakhadi akho esesimweni esihlanzekile uma uwadinga!
Ukwesekwa kochwepheshe - Sinaka kakhulu imininingwane futhi siqinisekisa ukuthi ujabulile ngokuphelele ngedizayini ngaphambi kokuthi siyithumele ukuthi iphrinte. Uma ukhetha insizakalo yethu yokuklama, ungaqiniseka ukuthi uzothola ikhadi lebhizinisi elifanele inkampani yakho ngokuphelele!
Print PeppermintIthimba labaklami nochwepheshe bokuphrinta balapha ukuze basize futhi bakusize uthole ikhadi lebhizinisi olidingayo ukuze usize ibhizinisi lakho likhule.
Kungakhathaliseki ukuthi usaqala futhi ufuna ugqozi lokuklama ikhadi lebhizinisi, noma ufuna ukulungisa kabusha amakhadi akho akhona ukuze ahambisane kangcono nesiqondiso somkhiqizo wakho, izinsiza zethu zokuphrinta zingakunikeza lokho kanye okudingayo!
Uma ufisa ukwazi okwengeziwe ngamasevisi ethu, sihlala sitholakala ukuze sixoxe, ngakho bhukha ucingo olufushane nathi noma usithumele i-imeyili ngayo yonke imibuzo yakho.
Ukuze uqalise ukuphrinta ikhadi lakho lebhizinisi, sitshele okwengeziwe ngephrojekthi yakho futhi uthole isilinganiso sakho sangokwezifiso sokungazibophezeli kanye nokubonisana kwamahhala kweyakho umbono wokudala.
Sibheke ngabomvu ukuguqula umbono wekhadi lakho lebhizinisi ube ngokoqobo!
Imibhalo Ethakazelisayo Ehlobene Namakhadi Ebhizinisi
11 Izakhiwo Zokwakheka Eziqinisekisiwe Ukwenza Amakhadi Ebhizinisi Lakho abukeke Akhulu
Esikhathini sedijithali lapho konke kufakwa kudivayisi eyodwa, ukuthwala izengezo kungabonakala kungafuneki kangako. Amakhadi ebhizinisi, noma kunjalo, ahlukile kulowo mbono. Eqinisweni, ikhadi lakho lebhizinisi liyinto eyodwa elula kakhulu kunobuchwepheshe bamuva. Uma uhlangana nekhasimende elisha noma ibhizinisi elisha… Funda kabanzi
Amafonti ayi-10 Amakhadi Aphakeme Wokuphrinta.
Lapho udizayina ikhadi lebhizinisi elifanele wena noma ibhizinisi lakho, kunezinto eziningi okufanele uzicabangele - imibala, ikhwalithi yephepha, ama-logo, yiluphi ulwazi okufanele ulufake, kanye neminye imininingwane. Ngokuyinhloko, enye yezinto ezinganakwa kakhulu ekwakhiweni kwamakhadi ebhizinisi mhlawumbe ukukhetha ifonti. Ukukha ifonti elungile kungaba… Funda kabanzi
Imibono engu-11 yeKhadi Lebhizinisi Le-Realtors, ama-Agent, nama-Brokers
Abathengisi bezindlu abavamile ukutholakala bengenawo amakhadi abo ebhizinisi njengoba bebona ukubaluleka kokuqinisekisa ukuthi abathengi abangaba khona bayazi ukuthi bangobani nokuthi benzani. Vele, ukuba ngumthengisi wezindlu kusho nokusesha amathuba lapho engekho. Ngakho-ke, ukuba namakhadi ebhizinisi amasha nalawo asungula kuyadingeka. Ku… Funda kabanzi
Imibuzo Evame Ukubuzwa - Amakhadi Ebhizinisi
Ingabe amakhadi ebhizinisi amancane awumbono omuhle?
Awu… sicabanga kanjalo! Nasi isizathu: 1. Zilungele indawo ezungezile (yonga iphepha noyinki) 2. Zihlukile, okuthile kunezinga elivamile elingu-2″ x 3.5″ 3. Zingasetshenziswa njengama-hangtag (sebenzisa nje isibhakela ngesandla ukukhipha imbobo) 4. Bathobekile futhi bahle 5. Bathatha kancane ... Funda kabanzi
Ingabe amakhadi ebhizinisi ayisikwele angena esikhwameni?
Yebo. Uma kubhekwa ukuthi mancane kunekhadi lebhizinisi elingamayintshi angu-3.5, amakhadi ayisikwele angangena kahle esikhwameni. Futhi hhayi lokho kuphela, amakhadi ebhizinisi ayizikwele angena ngaphakathi kwephakethe le-fob (iphakethe elincane ku-jeans yakho), noma ephaketheni lehembe. Kepha ungacabangi ukuthi usayizi omncane usho ukuthi mncane… Funda kabanzi
NgesiNgisi, abizwa ngokuthi “amakhadi ebhizinisi”. Auf Deutsch werden sie “Visitenkarten” genannt. Nge-español, se llaman “tarjetas de presentación”. En français, on les appelle des “cartes de visite”. في اللغة العربية , يطلق عليهم بطاقات العمل. Ngesi-italiano si chiamano “biglietti da visita”. हिंदी में, उन्हें व्यवसाय कार्ड कहा जाता है।
Akulu kangakanani amakhadi ebhizinisi amancane?
Usayizi wethu omncane ojwayelekile ungu-1.5" amayintshi x 3.5" amayintshi Kodwa, uma lokhu kungahambisani nezidingo zakho singasika amakhadi akho abe nanoma imuphi usayizi, qala i-oda langokwezifiso lapha.
Kuhlala isikhathi esingakanani amakhadi webhizinisi e-layered (multi-loft)?
Lawa makhadi aklanyelwe ukuhlala iminyaka. Kodwa-ke, ukuvezwa amazinga okushisa aphezulu kungaholela emiphumeleni engathandeki. Ngakho-ke, welulekwa ukuthi ungawavezi la makhadi emakhazeni kakhulu noma ekushiseni nasezimeni ezomile kakhulu noma ezinomswakama.
Amakhadi ebhizinisi ashiya umbono ohlala njalo. Ikhadi lebhizinisi lingenza noma lonakalise ibhizinisi lakho. Ingadonsela amakhasimende amaningi kuwe njengoba nje ingathumela amakhasimende akubalekela. Inani lekhadi lebhizinisi alinakubukelwa phansi njengoba izinzuzo zingaphezu kokubi. Njengamanje, amabhizinisi amaningi amasha… Funda kabanzi
Athini amakhadi webhizinisi alwelwe?
Siqala ngesitokwe sekhava esingu-16pt esiqinile, bese kuthi ngemva kokunyathelisa, sihlanganise iphepha phakathi kwezingqimba ezimbili ezincane zefilimu ecacile. Kodwa kungani, ubuza? I-soft-touch lamination iyanezela: ukuthambile ekuthinteni umuzwa wokuba namandla engeziwe & ukuqina okuthuthukisiwe ukugoba ukumelana namanzi & nokumelana nokuklwebheka kuhlanzekile, imiphetho enqunyiwe ecwebile (akukho fraying) efiselekayo ephezulu ... Funda kabanzi
Yiziphi izikhathi zokuguqula amakhadi webhizinisi le-foil?
Ulayini wokukhiqiza wamakhadi ethu ajwayelekile we-foil uthatha izinsuku zebhizinisi ezi-3-4 + ukuthunyelwa (ngokuvamile izinsuku zebhizinisi ezi-1 noma ezi-2). Amakhadi ethu ebhizinisi e-premium foil anoshintsho lokukhiqiza lwezinsuku zebhizinisi eziyi-7-9 + nokuthunyelwa (ngokuvamile izinsuku zebhizinisi ezi-1 noma ezi-2).
Ngiliqamba kanjani ikhadi lebhizinisi?
Liklama Kanjani Ikhadi Lebhizinisi: Umhlahlandlela Wesinyathelo Ngesinyathelo Udizayinwe ngu: Shakil Rahman “Idizayini enhle ifana nesiqandisi – uma isebenza, akekho oyibonayo, kodwa uma ingakwenzi, iyanuka impela.” - I-Irene Au Trillions yamakhadi ayaphrintwa ngalesi sikhathi. Kepha bambalwa kuphela… Funda kabanzi
Ngiwubeka kanjani umsebenzi wobuciko be-Spot Gloss UV?
Amakhadi ethu ebhizinisi epulasitiki we-premium enziwe nge-polypropylene esezingeni eliphakeme. Kutholakala ezinhlotsheni eziningi zokuqeda nobukhulu, ungazikhethela amakhadi ebhizinisi epulasitiki aqinile ukuze avumelane nomkhiqizo wakho. I-Polypropylene ivuselelwa kabusha ngo-100%, ngakho-ke lawa makhadi abhekwa njengezinketho ezinobungani. Ngokuya ngobukhulu, amakhadi ethu e-PT angama-30 afaka ikhredithi ejwayelekile… Funda kabanzi
Kwakukhona, mhlawumbe, isikhathi lapho wonke amakhadi ebhizinisi ayenobukhulu obufanayo (okungenani wonke amakhadi ebhizinisi endaweni efanayo yendawo), kodwa leso sikhathi sesifikile futhi sadlula. Namuhla, nakuba usayizi "ojwayelekile" usekhona, ziningi ezinye izinketho ezivamile zokulinganisa, futhi. Ngakho-ke, ungazi kanjani ngokunembile ukuthi mangaki amaphikseli ... Funda kabanzi
Yimiphi imidwebo yamakhadi webhizinisi oyinikezayo?
Sinikeza amajamo wekhadi lebhizinisi elijwayelekile elingu-7. Singakwazi futhi ukwenza umsebenzi wangokwezifiso uma ungathanda ukuba ikhadi lakho lebhizinisi livelele kunokuba uhlangane nenqwaba yamakhadi amathemba akho awayisa ekhaya ngemva kwengqungquthela. Ngensizakalo yethu yokusika ukufa, ungaguqula noma yimuphi umumo ongawuphupha ube… Funda kabanzi
Kungani ikhadi lami lebhizinisi liqhekeka emaphethelweni?
Uma amakhadi ebhizinisi eqhekeka emaphethelweni, ngokuvamile kungenxa yokuthi ikhadi lingase libe namanani aphezulu kayinki, njengemibala emnyama. UKUVALA KWEKHADI LEBHIZINISI Imiphetho Eqhekekile Lokhu kwenzeka ngengxenye encane yamakhadi ngokuhamba kwesikhathi. Sebenzisa imibala ekhanyayo ukugwema lokhu noma usebenzise uyinki omncane ngangokunokwenzeka uma usebenzisa ... Funda kabanzi